Efitra Sauna Cedar POD
Ny sedera mena tandrefana no hazo sauna ankafizinay indrindra. Ny hazo cedar sauna dia matanjaka, maivana, mazàna tsy miolakolaka na mihena rehefa mandeha ny fotoana, afaka mamolavola sy manamboatra endrika sy habe mifanaraka amin'izay ilainao izahay.
Ny varavarankely boribory mahatalanjona boribory ao amin'ny maodelin'ny Panoramic an'ny saika barika dia manome tombony betsaka ho an'ny saonika zaridaina nentim-paharazana.
Sauna ivelan'ny ranonorana
Azo afindra malalaka amin'ny toerana rehetra (efitrano sauna infrareda lavitra) izy io, nefa tsy jerena ny haben'ny habaka sy ny toerana fametrahana azy
Efitra Sauna Barrel any ivelany
Ho an'ny fanandramana sauna mety indrindra, ny hazo dia mila mahay manitatra sy mifanakaiky amin'ny mari-pana ambony.
Ny fampiasana fantsika be loatra sy ny fatotra hafa dia mety hiteraka hazo misaraka. Ny fivorian'ny ball-and-socket an'ny barika sauna dia mamela ny hazo hivelatra sy hifanaraka ao anaty tariby vy, mamorona tombo-kase henjana izay tsy mahomby.
Sauna barika ivelany (Tsy misy lavarangana)
Mametraka ny vatan'olombelona amin'ny rivotra mafana sy mando i Sauna, izay manafaingana ny fivezivezen'ny rà sy ny metabolisma, ary manatsara ny fiasan'ny sela sy ny taova ao amin'ny vatana iray manontolo, ao anatin'izany ny ati-doha, ny fo, ny aty, ny spleen, ny hozatra ary ny hoditra.
Birao hazo fefy
Fish scale-B Cedar Shingles